အကောင်းဆုံးအာဂျင်တီးနား Linux ဖြန့်ဖြူး | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Ubuntu၊ Fedora, Mint, Arch နှင့်အခြားအရာများနှင့်အကျော်ကြားဆုံး distros အချို့ကိုသာသိကောင်းသိလိမ့်မည်။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်ခြေကျယ်ပြန့်ရှိ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုသိပ်မများသော်လည်းအရည်အသွေးနိမ့်သော distros များ။ ဒီအခွင့်အလမ်းမှာမင်းကိုငါတင်ပြမယ် အကောင်းဆုံး "အာဂျင်တီးနား distros"။ 🙂
UTUTO Linux-libre kernel ကိုသုံးသော GNU operating system ဖြန့်ဖြူးသည်။ ၎င်းအမည်သည်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှမြက်ပင်မျိုးစိတ် (Homonota borelli, Gekkonidae) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ Ututo သည် GNU စီမံကိန်းမှလုံးဝလွတ်လပ်စွာအသိအမှတ်ပြုခံရသည့်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်သည်.
၂၀၀၆ အောက်တိုဘာ ၂၇ တွင် UTUTO စီမံကိန်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် အာဂျင်တီးနား Nation ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်အောက်လွှတ်တော်အားဖြင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကြေငြာခဲ့သည်.
တူquito (Luminescent abdomen insect, Luciérnaga - Lampyridae ဟုလူသိများသော) သည် Ignacio Díaz၊ Chris Arenas နှင့် Mauro Torres မှဖန်တီးခဲ့သောTucumánမြို့မှ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ Garfio ကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ Tuquito ကဲ့သို့ LiveCD ဖြန့်ဝေမှုများမှ ၎င်း၏နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းကို Mauro Torres နှင့် Mario Colque တို့က Garfio ဗားရှင်းသစ်ထုတ်လုပ်သူများကတီထွင်ခဲ့သည်။
အချို့သော Tuquito အဖွဲ့မှတီထွင်သော application များ:
APTITO: APT အတွက် download accelerator ။
Control Center - ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောထိန်းချုပ်မှုစင်တာ။
Tuquito RSS: Tuquito ၏တရားဝင်ဆိုဒ်များ (RSS reader) ၏အဖြစ်အပျက်များကိုအသိပေးချက်။
ချိတ် - အရန်ကူးယူထားသောမိတ္တူများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြန့်ဝေမှုများထုတ်လုပ်သည့်စက်။
TuquitUP: Tuquito ဗားရှင်းမန်နေဂျာ။ အွန်လိုင်းမွမ်းမံခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။
မိဘထိန်းချုပ်မှု - ဆိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။
ပရိုဂရမ်မန်နေဂျာ - ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုတပ်ဆင်ပြီးဖယ်ထုတ်ရန်အပလီကေးရှင်း။
Tuquito WIA - အသစ်စက်စက်တပ်ဆင်ထားသည့် application များ၏နေရာကိုအသိပေးသည့် application ။
Musix GNU + Linux Knoppix, Kanotix နှင့် Debian တို့ပေါ်တွင်အခြေခံထားသော LiveCD Live-DVD နှင့် Live-USB တွင်တင်ဆက်သည့် Linux ဖြန့်ဖြူးသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်နှင့်၎င်းတို့၏မိခင်ဖြန့်ဝေတွင်ပါရှိသောစီးပွားဖြစ် software ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် ၎င်းကို ၁၀၀% အခမဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဂီတသမားများ၊ အနုပညာရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ စာသင်ခန်းများတွင်အနုပညာသင်ကြားခြင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ၁၀၀% အခမဲ့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသောပထမဆုံးဖြန့်ချိမှုတစ်ခု (နှင့်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခု) ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းကိုအစပျိုးသူနှင့်အတူတူဒါရိုက်တာသည်ဘရာဇီးလ် Gilberto Gorges နှင့်အတူလက်ရှိအာဂျင်တီးနားမားကို့စ်ဂျာမန်ဂူလီယက်မီတီဖြစ်သည်။ စပိန်ဒံယေလ Vidal Chornet သို့မဟုတ်José Antonio GonzálezGarcíaကဲ့သို့သော developer တစ်ဒါဇင်ပါ ၀ င်သည်။ Musix GNU + Linux သည်အာဂျင်တီးနား မှစတင်၍ သုံးစွဲသူများနှင့်ပရိုဂရမ်မာများအစုအဝေးတစ်ခုလုံး၏ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးလ်၊ စပိန်၊ ဥရုဂွေး၊ အမေရိကန်၊ မက္ကဆီကို၊
Lihuen GNU / Linux သည် GnuLinEx ကို အခြေခံ၍ Linux ဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Argentina ရှိ La Plata တက္ကသိုလ်၏သတင်းအချက်အလက်ဌာနမှတီထွင်သည်။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် standard installation CD အပြင် Live CD ဗားရှင်းလည်းရှိသည်။ Lihuen သည်ပညာရေးကို ဦး တည်ထားပြီး OLPC စီမံကိန်းကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ version 2.x တွင် Lihuen သည် Debian GNU / Linux ကိုအခြေခံသည်။
Dragora သည်လွတ်လပ်မှု၊ ဘာသာစကား၊ စပိန်ဘာသာ၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Slackware နှင့်ဆင်တူသောဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအခြားမည်သည့်ယခင်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုမှမအခြေခံဘဲအာဂျင်တီးနားတွင်တီထွင်ခဲ့ခြင်း၏အထူးသဖြင့်ရှိသည်။ နဂါးက အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖောင်ဒေးရှင်းကအကြံပြုဖြန့်ဝေတစ်ခုသောကြောင့် ၎င်းသည် ၁၀၀% အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် i686 ဗိသုကာအတွက်စုစည်းထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပရိုဆက်ဆာများအကြားကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲမှုကိုပေးသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗိသုကာများတွင်မှန်ကန်သောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေသည်။
KISS အတွေးအခေါ် - KISS နိယာမက "Keep It Short and Simple" ဟူသောအင်္ဂလိပ်စကားစုနှင့်ကိုက်ညီသောအတိုကောက်ဖြစ်သည်။ အရာများကိုရိုးရှင်းစွာထားရန်ရိုးရာအစဉ်အလာဖြစ်သော Unix အတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။
YAGNI အတွေးအခေါ် YAGNI သည် "သင်မလိုအပ်တော့ပါ" ဟူသောအင်္ဂလိပ်စကားစုနှင့်ကိုက်ညီသောအတိုကောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။
ဒYန: DRY ဆိုသည်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင် "မလုပ်ပါနဲ့" ဟူသောစကားစုနှင့်ကိုက်ညီသောအတိုကောက်ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည် (သင်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ပါနှင့်) ။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်အပိုင်းများကိုပုံတူပွားခြင်းမပြုရန်အားပေးသည့်ဆော့ဝဲလ်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်စီမံကိန်းကအနည်းဆုံးအသုံးပြုသောအယူအဆ, ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
Urli ၉.၀၄ ၎င်းသည်အခမဲ့၊ မြန်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသော Linux operating system ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သော "Vieron" သည်အထူးသဖြင့် Vista နှင့်ဆင်တူသည့်ဂရပ်ဖစ် interface ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး Linux သို့ပြောင်းလဲလိုသော Windows အသုံးပြုသူများအတွက် operating system ကိုလွယ်ကူစွာရွှေ့ပြောင်းနိုင်စေရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်းသည် Ubuntu နှင့် Debian အခမဲ့ဖြန့်ဝေမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ သို့မှသာ Linux ၏အားသာချက်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလိုအလျောက်မျိုးဆက်သစ် graphical interface နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
URLI 9.04 သည်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောဂရပ်ဖစ်စတိုင်ကိုပေးထားသည်။ ပရိုဂရမ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူပြီးနောက်ဆုံး၌ Beryl-Compiz နှင့် 3D အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအပြည့်အဝထောက်ပံ့သည်။
Win-Modem မောင်းနှင်မှုများ၊ kernel အသစ်၊ ALSA ဗားရှင်းအသစ်၊ KDE အသစ်၊ မာလ်တီမီဒီယာပလေယာများနှင့်ပိုမိုသောသဟဇာတဖြစ်မှု၊ အဝေးထိန်းခလုတ်များအတွက်အထောက်အပံ့။ Office suite နှင့် Microsoft Office စာရွက်စာတမ်းများ၊ update package မန်နေဂျာ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်ပြီး web browser၊ CD / DVD burner နှင့် multimedia player တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
Urli 9.04 ကို LiveCD တွင်ဖြန့်ဝေသည်။ ၎င်းသည်သင့်ကွန်ပျူတာအားတပ်ဆင်ရန် (သို့) မည်သည့်ဖိုင်ကိုမှပြုပြင်စရာမလိုဘဲ၎င်းကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ နောက်မှတပ်ဆင်လိုပါက၊ graphical installer ကိုစတင်ရန် Urli desktop shortcut ကိုနှိပ်ပါ။
Cyberlinux ၎င်းသည် Ubuntu မှဆင်းသက်လာသို့မဟုတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် Argentine မူရင်း Linux ဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲလ်အထုပ်နှင့်ဖိုင်များကိုအင်တာနက်ကဖေးများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးများ၊ ကုမ္ပဏီများစသည်တို့တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖန်တီးပြီး ဦး တည်သည်။
Ciberlinux (ဗားရှင်း ၁.၃ "ပင်ဂွင်းများ" မှ) Gnome ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသော Windows style ပုံစံနှင့် workstation control program အနေဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လိုင်စင်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော cbm ကိုအသုံးပြုသည်။
Pinguinos (၁.၃) (၂၀၁၀) ဗားရှင်းအတွက် DVD (1.3 gb) DVD ကိုသိမ်းထားပြီး၎င်းကို Live DVD အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ remastersys ကို system backup နှင့် live-DVD နှစ်ခုလုံးထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Sirius OS အလွန်တည်ငြိမ်သော Gnu / Linux operating system ကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် micronucleus စနစ် (kernel ၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖွင့်ရန်တာဝန်ခံ) နှင့်၎င်းပေါ်တွင်“ ဆာဗာ” mode တွင်အမြဲတမ်း POSIX စံနှုန်းများကိုလေးစားမှုမရှိသော monolithic kernel မှဆင်းသက်လာခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
အသုံးပြုသူများစွာ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်အချိန်ကြောင့် Sirius OS သည်လုံးဝပွင့်လင်းပြီးအခမဲ့သောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ မည်သူမဆိုသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပိုင်း၊ ဒီဇိုင်းတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ထင်မြင်ယူဆချက်များသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်များနှင့်ပူးပေါင်းရုံမျှဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
၎င်းသည် GNOME ကိုအခြေခံပြီးဖြန့်ဖြူးသည်။ ၎င်းတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်မှုများ kernel နှင့်မကြာမီဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အိမ်ရှင်၏ပြproblemsနာများကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ download ပြုလုပ်၍ မရပါ။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်သင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
Pixart SRL ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအထူးပြုတည်ဆောက်ထားသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Rxart Desktop, Rxart Server, Rxart Family Pack, Rxart Abogados စသည့် Linux Operating System ကို အခြေခံ၍ ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သည်။
Corel ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်လက်တင်အမေရိကစီးပွားဖြစ်Pရိယာကို Pixart ၏လက်အောက်၌ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထားခဲ့သည်။ Corel သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကိုရပ်ဆိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်၊ Pixart သည်နည်းပညာနှင့်တရား ၀ င်အထောက်အပံ့များကို Corel မှရရှိသောစီမံကိန်းအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Corel သည် Operating System ကို Xandros Inc သို့လွှဲပြောင်းပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် Pixart ကစပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သဘောတူညီချက်ရရှိသည်။ Pixart သည်လက်တင်အမေရိကစျေးကွက်၏ဗဟုသုတနှင့်ဗဟုသုတဖြင့်စပိန်စကားပြောထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
Rxart Desktop 3.2 သည် Linux desktop OS တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်၊ ကစားရန်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်လိုအပ်သော application အားလုံးပါ ၀ င်သည်။
တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော Debian Linux ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဝပုံစံ၊ သင်လိုချင်သည့်ပုံစံ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ စပိုင်ဝဲများနှင့်အခြားလုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုများမပါ ၀ င်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။
မှတ်စု: အာဂျင်တီးနား Pixart မှဖြန့်ချိသောအရာများအားလုံးကိုပေးဆောင်ရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အကောင်းဆုံးအာဂျင်တီးနား Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
သင်၏တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့်အတန်းသမိုင်းကိုအရှက်တကွဲအကျိုးမပြုပါ။ အခြားသူများ၏လွတ်မြောက်မှုကိုသူတို့မလိုလားပါကမည်သူမျှအမှန်တကယ်လွတ်လပ်ခြင်းမရှိပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အစဉ်အမြဲလေးစားမှုနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဘလော့ဂ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ER ကိုအကြံပြုတာကအရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့ distro ဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ ပင်အပြုသဘော Distrowatch အားဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ငါဒီအကြောင်းပြောမယ်။ အားလုံးကိုလေးစားစွာဖြင့်
ဟားဟား။ ဤလက်ဝဲလက်ကိုင်များသည်မယုံနိုင်စရာကောင်းသည်။ ချစ်လှစွာသောချန်းဂို၊ အာဂျင်တီးနားလူများစုသည်ကွန်မြူနစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူအာဏာရှင်စနစ်အပေါ်သင်၏အိပ်မက်များကိုမလိုက်လျော၊ သင်ဘာလုပ်ရမည်၊ အာဂျင်တီးနားအလံသည်အပြာနှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ ဒီအပြင်အကြမ်းဖက်သမားလိုလားတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ဟာမူလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရမယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုစဉ်းစားမိမှာလဲ။
Carlos 26 ကဲ့သို့ Anonimous သည်သူတို့ပြောနေတာကိုသူတို့မသိပါ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Chango ၏အဆိုအရကွန်မြူနစ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများသည်အမှန်တရားကကျွန်ုပ်အားနာကျင်စေပြီးသင့်မိသားစုကိုဆင်းရဲသားများဟုထင်လျှင်၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခွဲခြား၍ မည်သို့ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိကြောင်းနှင့် CNN တွင်မည်သို့ဖြစ်ပျက်သည်ကိုသတိပြုမိသည့်ပညာရေးဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သမိုင်းကိုသင်မသိရင်စကားမပြောပါနဲ့၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖွင့်ပြီးအနည်းဆုံးစိတ်ကူးမရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုစပြီးမှတ်ချက်ပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ငြီးငွေ့ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ရှက်နေတယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ကိုဝိုင်းရံပြီးမင်းကိုခွဲခြားဆက်ဆံဖို့နဲ့သင်ဟာဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့သင်သိပြီးတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသာဖြစ်သည်၊ သင်နောက်ခံနှင့်အိုင်ကွန်များကိုသင်မကြိုက်ပါကသင်မသိသေးလျှင်၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်မစမ်းကြည့်လျှင်အမေရိကန်တွင်နေထိုင်။ မသွားပါကကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါက ... facho ...
အဘယ်ကြောင့် Red Star ဒီအကွာအဝေး၌မပါသနည်း
ငါမင်းကိုလွမ်းတယ်နင့် Tango GNU / Linux: http://www.tangolinux.com.ar/
ငါ Tango GNU / Linux ကိုလည်းထပ်ထည့်သည်။ http://www.tangolinux.com.ar/
ကောင်းပါပြီ၊ ဤ post သည်အခြားကမ္ဘာ့စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ငြူစူရန်မလိုအပ်သောအာဂျင်တီးနားဖြန့်ချီသူများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါအခြား distro ထောက်ပြချင်တယ်, ကအာဂျင်တီးနားမဟုတ်ပေမယ့်သူကဒဏ္myာရီသို့မဟုတ်အမှန်တရားအားဖြင့်ဖြစ်စေခက်ခဲအခက်အခဲများအသုံးပြုချင်သောသူတို့အဘို့တာဝန်အလွန်လွယ်ကူချောမွေ့။ ၎င်းကို Salix OS ဟုခေါ်သည်။ "bonsai system" ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုအတွက် (သို့သော်လက်ပ်တော့များတွင်အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်၎င်း၏ Xfce နှင့် LXDE ဗားရှင်းများ၏ကျေးဇူးကြောင့်အလွန်ပေါ့ပါးသည်) Desktop ကို ဦး တည်သည်။
သင်၏ slackware မှဆင်းသက်လာသော Distros ကဏ္toတွင်သင်ထည့်သွင်းရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ လေးစားပါတယ်
အိုး၊ Salix OS ကိုစပိန်ဘာသာသို့ကောင်းစွာပြန်ဆိုနိုင်ပြီးစပိန်စကားပြောနိုင်ငံများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။
ဤအချက်အလက်ကိုဝေမျှပေးသောကြောင့် Chango အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါအနာဂတ် post ကိုများအတွက်အကောင့်ထဲသို့ယူပါလိမ့်မယ်။
Gabriel de Leon ဟုသူကပြောသည်
ငါ Huayra ထည့်ချင်တယ်၊ အဲဒါဟာစီမံကိန်းအသစ်ဖြစ်ပုံရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်လည်းအာဂျင်တီးနားပါ။
Gabriel de Leon ထံပြန်ပို့ပါ
Huayra ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုဤ distro နှင့်ဖတ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ http://usemoslinux.blogspot.com/2012/12/probamos-huayra-linux-la-distro-del.html
၎င်းသည်အစွန်းရောက်ဝါဒကိုအသည်းအသန်ဖြစ်စေသည်၊ ငရဲသည်ဘာလုပ်သနည်း၊ အာဂျင်တီးနားနှင့်ကျူးဘားတွင်သာလူသိများသောလူသတ်သမားနှင့်ကွန်မြူနစ်အာဏာရှင်စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူကပြောသည်ကိုနားမလည်သောချိတ်ဆွဲထားသည့်ကျောက်တုံးကြီးအချို့ နေဆဲ ဒါဟာလုံးဝရယ်စရာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားခွင့်ကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီလိုမျိုးမျိုးကကျွန်တော့်ကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရတာရှက်စရာပါ။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Red Star GNU / Linux၊ အလွန်ပြီးပြည့်စုံ။ မြန်ဆန်သော Debian Lenny အခြေပြု distro ကိုမမေ့ပါနှင့်။
အလွန်ဆိုးဝါးသော Tuquito အား Tuquito hosting ပြုလုပ်သောသူ၏ဆာဗာတွင် phishing site ရှိခဲ့သူ Mauro Torres ဟူသောအမည်ဖြင့်စွန်းထင်းနေသည်။ အရှက်
မေမေမေမေ 21 ဟုသူကပြောသည်
ပျောက်နေသည့် Puppy-es OS
မှတ်ချက်တွေတူညီတဲ့အစဉ်အမြဲငါအမြဲတမ်းရှိနေလေ့ရှိပြီးများသောအားဖြင့်သတိထားမိခြင်းမရှိသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသွားမည်။ အာဂျင်တီးနားလူမျိုးများကကျွန်ုပ်တို့သည်အရာအားလုံး၌အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုင်းပြည်မှထွက်ခွာသည်အထိပျောက်ကွယ်သွားသည့်မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်များဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။ ငါအာဂျင်တီးနားမှထွက်ခွာခြင်းအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်၊ သြစတြေးလျ, နယူးဇီလန်, အာရှ။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး၊ လူတွေကငါတို့ထက်ပိုပြီးတီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာတိုက်ကြီးကနေမထွက်မချင်းသူတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့နေရာများစွာတွင်အလွန်ကောင်းသောလူသိများသောအရာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်မှာမှန်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မှတ်ဉာဏ်၏မိုက်မဲမှုအတွက်ဆက်လက်, အတိတ်ကာလ၌အသကျရှငျနှင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်များအတွက်စစ်တပ်, တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်လက်ဝဲ - ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သည်ခိုးယူဆက်လက်နှင့် "အပြင်လူကျွန်တော်တို့ကိုစားလိမ့်မည်။ " နားလည်ပြီလား
စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဘယ်တော့မျှဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်“ savías” ကိုမြည်းအတွက် B နှင့်ရေးသားထားသည်ဟူသောအချက်ကိုပြောသော Debian စကားဖြင့်စာအုပ်များစွာကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်သူတို့တွင်“ ကြည့်” ရန်ရှိသည် အဘိဓာန်အဘိဓါန်။
Cyberlinux xD သည်မည်မျှရုပ်ဆိုးပါသည်
ငါ iso image ကို download လုပ်ရန်မည်မျှခက်ခဲသည်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက 32 bits ထဲကထွက်လာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ 64 bit အောက်မှာ Windows7သည် 64 bits ဖြစ်ပြီး Linux ကို install လုပ်နိုင်လျှင်ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာမြင့်သည်။ jodia iso image ပြီးတော့ Winrar ကိုဖွင့်ပြီး DVD (သို့) flas မှာဘယ်လိုကူးယူမလဲ၊ ငါ့ကိုဖတ်ပြီးဖြေကြားတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux အတွက်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
Huayra 2.0 သည်အသုံးပြုသူများအသစ်၏လက်ခံမှုနှင့်အတူဗားရှင်းအသစ်သည်အလွန်ခက်ခဲသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Windows7ကိုလက်ရှိအသုံးပြုနေပါသည်။ ကျွန်ုပ် format ပြုလုပ်သင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်တွင်မူရင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်မတပ်ဆင်ထားသည့်အတွက်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်တော့်သားတစ်ယောက်က Linux ကိုအကြံပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သာနားမလည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအကြံပေးလိုပါသည်။ စက်သည်အိမ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Word, Excel, Power Point ကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များကိုသုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Office package နှင့်တူညီသည်။
Micro $ soft office အတွက်ရွေးချယ်စရာများမှာ libreoffice (သင် guindou $ အပါအ ၀ င်မည်သည့်စနစ်တွင်မဆိုစမ်းသုံးနိုင်သည်) နှင့်မီးမောင်းထိုးပြထားသည့်ရုံးများကြားတွင် openoffice တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ခုလုံးမှာ power point ရှိတယ်။ Foxit pdf စာဖတ်သူသည် pdf အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အခြားအသေးအဖွဲကိစ္စများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပါကသင်၌အဆုံးမဲ့ဖြန့်ဝေမှုများရှိသည်။ livecd mode ရှိသည့် trisquel 7.0 distro ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ် (အကယ်၍ သင်ကဗီဒီယိုကဒ်နှင့် input wifi ကိုမယူတော့လျှင်သင် pc boot ၌၎င်းအတွင်းရှိ image သို့မဟုတ် usb နှင့်အတူဘာမှမတပ်ဆင်ဘဲနှင့်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်) အကယ်၍ သင်ကအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဘာမှပြုပြင်စရာမလိုတော့သည့်အပြင်အခြားအရာများဖြစ်သော (web browser, video player, gnash, etc) တို့တွင် libreoffice ထည့်သွင်းထားသည်နှင့်အတူပါရှိသည်။ ကံကောင်းပါစေဒီအချက်အလက်ကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
နောက်တဖန်ငါမှတ်စုစာအုပ် 32 ခကြောင်းမှတ်ချက်ပေးရန်ရေးပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းကအရေးကြီးတယ်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းလူ !!! ဘာလို့လဲဆိုတော့ Linux ကိုကျွန်ုပ်၏ desktop ကွန်ပျူတာဖြင့်စတင်အသုံးပြုချင်လို့ပါ။ ဘာကိုစစရမလဲမသိဘူး။ ဘာရေးလဲ။ ငါဘယ်လိုရနိုင်လဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် .. နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုရှိရင်ငါထင်မြင်ချက်မှာမင်းဟာ Huayra GNU / Linux 100% Argentine လိုအပ်ပြီးဖြန့်ဖြူးမှုကောင်းကောင်းလိုအပ်တယ်။ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝံပုလွေ! ဒီ post ကို Huayra မတိုင်မီကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မထည့်ထားတာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ distro နှင့်ပတ်သက်သောပို့စ်အချို့ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော Tucuman တွင်မွေးဖွားသောလူများပြုလုပ်သော Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါက linux တစ်ခုနောက်တစ်ခုပါ။ ငါလည်းသုံးတယ်။ ကြီးမြတ်အပေါင်းတို့နှင့် ... အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ tuquito ကိုသုံးရင်အာဂျင်တီးနားမှာ tucuman နှင့်လက်နက်ရှိသည်။ သို့သော်သူတို့ကကောင်းသောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သောကြောင့် linus နှင့် stallman အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Ubuntu 10.10 အတွက် desktop wallpaper အသစ်